राजावादीहरूको उत्साह आत्मरति मात्रै – Sourya Online
राजावादीहरूको उत्साह आत्मरति मात्रै
अञ्जु कार्की २०७६ जेठ १४ गते ७:५३ मा प्रकाशित
छिमेकी मुलुक भारतमा भरखरै लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पाँच वर्ष अघि जस्तै नरेन्द्र मोदीले भारी बहुमतका साथ चुनाव जिते राहुल गान्धीले कन्त विजोग हुने गरी चुनाव हारे । तर यो चुनावी परिणामलाई लिएर हाम्रो देशको एउटा तप्का निकै धेरै उत्साहित भएको छ । भाजपाले चुनाव जितेको खुशीयालीमा मधेसी आन्दोलनको केन्द्र वीरगन्जमा राजावादीहरूको जुलुस निस्केको समाचार मिडियामा आयो । यस अघि मोदीले चुनावी रणनीति अन्तर्गत पाकिस्तान शासित काश्मिरमा आक्रमण गरेको सामाचार आउँदा पनि वीरगन्जमा यसरी नै जुलुस निकालेर खुशी प्रकट गरिएको थियो ।
भाजपाले चुनाव जित्दा र कांग्रेसको कन्तविजोग हुँदा नेपालीहरू खुशी हुनु पर्ने तथा दुखी हुनु पर्ने कुनै कारण छैनन् । केवल आत्मारती मात्रै हो । हरेक देशले केन्द्रविन्दुमा राख्ने भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । आफ्नो देशको स्वार्थलाई भन्दा छिमेकीदेशको स्वार्थलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिँदैन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग गरेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोस्नका लागि राजा महेन्द्रलाई सहयोग गरेकै हो । यसैगरी आफ्नो स्वार्थका लागि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले नेपाल माथि दुई–दुई पटक नाकाबन्दी लगाएकै हो ।
भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक ८ खर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा छ । मोदीले जित्दैमा भारतबाट कुनै पनि वस्तु निःशुल्क आउनेवाला छैन । कालापानीलगायत नेपालको करिब दुई हजार वर्गकिलोमिटर सिमाना भारतले मिचेको छ । मोदीले जित्दैमा त्यो भूमी नेपाललाई फिर्ता आउने वाला छैन । बरू मौका पाए थप सिमा मिच्नेछन् । जुन कुरा संविधान निर्माणका क्रममा दिएको सुझावले पुष्टि गरिसकेको छ
जुनबेला भारतमा विजेपीको सरकार थियो त्यहीबेला देखि नेपालमा माओवादी हिँसा सुरू भएको हो । माओवादीका नेताहरूलाई भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले के कसरी सेल्टर प्रदान गरेका थिए भन्ने फेहरिस्त हिमाल पाक्षिक खवरपत्रिकाको २०६९ साउन (१६–३२) अंकमा प्रा. सुखदेव मुनीले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘सन् २००२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको लिखितपत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुरामले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा आश्वस्त पारेपछि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा खुकुलो पारियो। यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो ।’ त्यो बेला भारतमा भाजपाको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री थिए अटलविहारी बाजपेयी ।
वास्तवमा नेपालमा स्थापित गणतन्त्र माओवादीद्धन्दकै उपज हो । तर गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्नेबेला भारतले नेपाल माथि नाकावन्दी लगायो । नेपालको संविधानमा यी यी बुँदा समावेश गर्नुपर्छ भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना विशेषदूतलाई नेपाल पठाए । तर नेपालको संविधानसभाले स्वीकार गरेन । यसैको परिणाम थियो चार महीने नाकावन्दी । विनासकारी भूकम्पले भन्दा पनि उक्त नाकावन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढी थिलो थिलो बनाएको थियो । त्यसैले भाजपाले जित्नु र कांग्रेसले हार्नु तथा कांग्रेसले जित्नु र भाजपाले हार्नुसँग नेपालको स्वार्थ कहीँ कतै जोडिन्न ।
नेपाल र छिमेकसँग भारतले गर्ने व्यबहार र रबैया, पाकिस्तान र चीनसँगको उसको सम्बन्ध, क्षेत्रिय सन्तुलन र शान्ती कायम गर्दै सार्क, एसियन, बिम्स्टेकमा लगायत सबै फोरममा अरूलाई पनि भाउ दिने काम सुरु भएमा मोदीको जितलाई यथार्थमा राम्रो मान्न भने सकिने छ
यतिबेला भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा बार्षिक ८ खर्ब रूपैंया हाराहारीमा छ । मोदीले जित्दैमा भारतवाट कुनै पनि वस्तु निशुल्क आउने वाला छैन् । कालापानी लगायत नेपालको करिव २ हजार वर्गकिलोमिटर सिमाना भारतले मिचेको छ । मोदीले जित्दैमा त्यो भूमी नेपाललाई फिर्ता आउने वाला छैन । बरू मौका पाए थप सिमा मिच्नेछन् ।
जुन कुरा संविधान निर्माणका क्रममा दिएको सुझावले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । भारतमा सुखशान्ति भयो भने नेपालमा सकरात्मक असर पर्छ । हामीले गर्ने कामना भनेको यही हो । आफ्नो देशमा सुख शान्ति कायम गर्न मोदी सफल रहून् । सामथ्र्य भए आफ्नो पार्टीको घोषित नीतिअनुसार आफ्नै देशमा हिन्दू राज्य कायम गरून् । हिन्दू राज्यका लागि यदी आवश्यक पर्छ भने आफ्नै देशमा राजतन्त्र कायम गरून् । आफ्नो पार्टीको एजेन्डा नेपालमा लाद्ने कोसिस नगरून् ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै गरिबहरू बस्ने मुलुक हो भारत । विश्वमा सबै भन्दा धेरै सामाजिक विभेद तथा उत्पिडनका घटना हुने देश पनि हो भारत । भारतीय समाजमा अन्धविश्वास र रूढिवादले जरा गाडेको छ । नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी त भारतमा सडक छापहरूकै संख्या छ । जसको पुस्तौँ पुस्ता सडकमै जन्मे हुर्केर बितिरहेको छ ।
नेपालको सडकमा देखिने मगन्तेहरूमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीयहरू नै छन् । नेपालमा तल्लो स्तरको काम गर्नेहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीयहरू नै छन् । पक्कै पनि मोदीले आफ्नो देशको यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई ध्यान दिनेछन् । मोदीले आफ्नो देशको यो कहाली लाग्दो समस्या समाधान गरे भने नेपाल पनि धेरै समस्याबाट मुक्त हुनेछ । पहिलो कुरा त नेपालका सडकहरू मगन्ते मुक्त हुनेछन्, दोस्रो कुरा नेपाली नागरिकता लिन आउने भारतीयहरूको भीड घट्नेछ । तेस्रो कुरा नेपालीहरूको रोजगारी खोस्न भारतीयहरू आउनेक्रम रोकिनेछ ।
मोदीले राम्रो काम गरकै कारण फेरी शासन सत्ता दोहो¥याउने गरी चुनाव जितेका हुन् कि ? धार्मिक तथा साम्प्रदायिक उन्माद पोखिएको मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ । गएको ५ वर्षमा मोदीले के भारतलाई साच्चै उन्नतिमा पु¥याए त ? राम्रो काम देखेर मात्र आएको भोट हो त ? भन्ने प्रश्न कम महत्वपूर्ण छैन । मोदीले सत्ता सम्हालेको यो पाँच वर्षको अवधिमा भारतमा बेरोजगारीको वृद्धि ६. १५ प्रतिशत पुगेको छ । विगत ४५ वर्षको अवधिमा यो वृद्धिदर सबै भन्दा उच्च हो । भारतमा १८ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् । जुन २०१२ यता सबै भन्दा धेरै हो ।
मोदीले शासन सम्हाल्नुअघि पनि गरिबीको प्रतिशत जति थियो, अहिले पनि त्यति नै छ अर्थात भारतमा २७ करोड जनता अझै गरीबीको रेखामुनी छन् । यो संख्या भनेको झण्डै झण्डै सिंगो युरोप महादेशको बराबर हो । स्थिर सरकारले ५ वर्षमा गरेको काम भाषणमा मात्र खोजेर हुँदैन तथ्यांक हेर्न पर्छ । त्यस्ता तथ्यांक त हाम्रा ओली कमरेडले पनि फ्याट फ्याटी भनिदिन्छन । भारतमा हरेक वर्ष हज्जारौँ किसानले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांक झुटो होइन । मोदीले जति गफ दिए पनि नोटबन्दीले भारतको अर्थतन्त्र घाइते बनाएकै हो । त्यसको असर नेपालले पनि बेहोरेकै हो ।
त्यही भएर पुराना नेता यसवन्त सिंहले गएको वर्ष मात्रै मोदी सुधारक होइनन भनेर भाजपा छोडे । यसको अर्थ के त संसारकै ठूलो लोकतन्त्र भएका देशहरू मध्येको एक भारत धार्मिक पपुलिजममा फसेको होइन त ? भन्ने प्रश्न त्यतिकै पेचिलो बनेर खडा भएको छ । भारतमा मोदीको उदय र संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रमको उदयलाई एउटै कोणबाट हेर्नुपर्ने विश्लेषण प्रख्यात अखबार वासिंगटन पोस्टले समेत गरेको छ । यदी यो सत्य हो भने ट्रम्पको उदय पछि अमेरिकाका छिमेकी मुलुक जसरी सताइएका छन्, मोदीको उदयपछि भारतका छिमेकी मुलुक पनि त्यसरी नै सताइने छन् । नेपाल पनि त्यसको घानमा पर्नेछ ।
बलियो डेमोक्रेसी भएको देश साना छिमेकीको प्रगतिमा किन खुसी वा सहायक हुन सक्दैन ? भन्ने प्रश्न अमेरिकामा ट्रम्पको उदय र भारतमा मोदीको उदयले खडा गरेको छ । त्यसैले मोदीको जितको अर्थ त्यतिवेला सार्थक हुन्छ जति वेला उनको छिमेक र पररास्ट्र नीतिले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई जोडोस, सार्कले सास फेरोस, अरू क्षेत्रीय शक्तिलाई मिलाएर आफ्ना छिमेकको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उत्थानमा पनि सघाओस । साना देशको उन्नति प्रगतिमा बाधक नबनोस्, र शक्तिशाली देशसँग स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरोस्, तब न संसारको ठूलो र उत्कृष्ट डेमोक्रेसी ।
नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई भारतको चाकडीमा मुसो नचाए जस्तो गर्ने गरेका मोदीले नेपालको पहिलो औपचारिक भ्रमणका वेला नेपाली संसद र सडकमा जनताबाट पाएको वाहवाही के त्यसपछिका भ्रमण र दुई पक्षिय मामिलामा प्रतिविम्बित भो त ? के चीनसँग हात मिलाएर नेपाल लगायतका साना देशसँग भारतले क्षेत्रिय सौर्हादता कायम गर्न हुँदैन र ? एकोहोरो जातीय र धार्मिक रटानका कारण भैरहेको बिभेद, हिंसा र अल्पसंख्यकहरूमा देखिएको निराशालाई सम्बोधन नगरिकन देशभित्र अझै व्याप्त घृणाको राजनीतिबाट माथि नउठिकन विश्व राजनीतिको मसिहा ठान्ने भूल भएमा भारत उँभो लाग्ला त ? छिमेकलाई फाइदा होला त ? तर पनि मोदीले अब आफ्नो शैली बदले भने फेरी यो कुरै गर्न परेन, तर जति वर्ष शासन गरे पनि जनसंख्याका आधारमा भएको ठूलो अर्थतन्त्र र बलियो प्रजातन्त्रको गफ गरेर मात्र के होला र ? नेपाल र छिमेकसँग भारतले गर्ने व्यबहार र रबैया, पाकिस्तान र चीनसँगको उसको सम्बन्ध, क्षेत्रिय सन्तुलन र शान्ती कायम गर्दै सार्क, एसियन, बिम्स्टेकमा लगायत सबै फोरममा अरूलाई पनि भाउ दिने काम सुरु भएमा मोदीको जितलाई यथार्थमा राम्रो मान्न भने सकिने छ । नेपालले चीन र भारतबाट के कस्तो अपेक्षा र कुटनीति अपनाउँछ त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राष्ट्रिय संकटको समाधानः यो सरकारद्वारा सम्भव छ ?
कमजोरी सरकारकोः दोष संविधानमाथि
नेपालमा श्वेतग्रिभी अपराध
नेपाली कांग्रेसः इतिहासकै कठिन चौबाटोमा
आफैँतिर फर्केर हेर्दा
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा २६० कैदीको सजाय कट्टा, २२ कैदीलाई माफी
सिद्धान्तमा कम्युनिष्टसँग बहस गरौँः वरिष्ठ नेता पौडेल
बालिका करणी गर्ने पक्राउ
भोजपुरमा कुकर बम विस्फोट
डेङ्गुका बिरामी घटे
असोज १० गतेदेखि नयाँ नोट साटिने
अमेरिकाको वासिङटनमा गोली चोल्यो, एकको मृत्यु, पाँच घाइते
लोकतन्त्र धरापमाः दोष कसको ?
गाउँपालिका अध्यक्ष माथिको बहुविवाह मुद्दा खारेज
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली परिवर्तन
याम र सुनिताको ‘वास्तै नगर्नी’ सार्वजनिक
अध्यक्ष दाहाल अस्पतालमा भर्ना